ड्रग्स केसमा समातिएका लाउरे रोडिजको पोखरा अडिसनमा जजकै कुर्सीमा, के उनी छुटेका हुन् र ? – Dainik Sangalo
ड्रग्स केसमा समातिएका लाउरे रोडिजको पोखरा अडिसनमा जजकै कुर्सीमा, के उनी छुटेका हुन् र ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २१, २०७८ समय: ११:५०:२१
काठमाडौँ : हिमालयन रोडिजको सोमबार प्रसारण भएको पोखरा अडिसनमा जजको कुर्सीमा देखिए लाउरे। लाउरे केही दिन अगाडि पोखरामै ब्राउन सुगरसहित समातिएका थिए। उनलाई अडिसनमा जजको कुर्सीमा देख्दा केहीले प्रश्न पनि गरे’ लाउरे हिरासतबाट निस्की सके र?’
तर हैन। पोखरा अडिसनको एपिसोड प्रसारण भइरहेको बेला लाउरे अडिसन स्थलमा हैन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमै थिए।प्रहरीले अनुसन्धानका लागि उनलाई ८ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाइसकेको छ अदालतबाट। लागू औषधको केसमा यो म्याद ९० दिनसम्मको हुनसक्छ।
त्यसो भए रोडिजमा कसरी त लाउरे ? रोडिजको निर्माण टिममा संलग्न स्रोतसँग यसबारेमा बुझ्दा लाउरे पक्राउ पर्नु अगाडि नै सो अडिसन खिचिसकिएको थियो। पोखरा अडिसनको सुट सकिएपछि मात्र लाउरेलाई पोखरामा प्रहरीले ब्राउन सुगर किन्न जाँदा समातेको हो। त्यसैले सोमबारको रोडिजमा लाउरे पनि जजको भूमिकामा देखिए।
युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य समेत रहेको कार्यक्रमका एक जज नै ड्रग्स त्यो पनि ब्राउन सुगरको केसमा जेलमा हुँदा उनै जज भएको कार्यक्रम प्रशारणहुँदा चैँ कस्तो-कस्तो देखिने रैछ। त्यसमा पनि अझ मोरलको कुरा गर्दै।
रियालिटी शो जुन लाइभ नभई रेकर्डेड हुन्छ त्यसका जज कुनै कन्ट्रोभर्सीमा परे जज हटाएर रिसुट गरिएको पनि छ। तर रोडिज टिम त्यतातिर लागेको देखिएन। लाउरे पक्राउ परेकै दिन उकेराले एक जजसंग अब के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा अब सुट भइसकेको एपिसोड त प्रसारणै होला भनेका थिए। भयो पनि त्यस्तै। तर कति भाग खिचिसकेको हो त्यो भने खुलेको छैन।
केस हेर्दा लाउरे तत्काल प्रहरी हिरासतबाट मुक्त हुने देखिन्न। उनी सहित २ जना डिलर अनि अर्का एक उनी जस्तै युजर समातिए पनि केस त एकै पटक जाने हो अदालत। त्यसैले ८ दिन मात्रै हैन उनको हिरासत यात्रा थपिने सम्भावना छ। त्यो बिचमा त रोडिजले नयाँ जज ल्याउँला कि !
Last Updated on: January 5th, 2022 at 11:50 am